Garret Augutus Morgan, abuuraha nalka taraafikada - Afrikhepri Fondation
Diiwaangelinta / Galitaanka
Ku dhaji fiidiyoow
Ku dhaji maqaal
Jimco, Sebtember 18, 2020
MOVIE SI AAD U aragto
XAQIIQDA IYO DIINTA
XIGASHO DHEERAAD AH
WAQOOYINKA IYO FASHIGA
BUUGSIGA SI AAD
Welcome BARNAAMIJYADA CIIDAMADA IYO GARGAARKA
Garret Augutus Morgan, oo ah khabiirka nalalka gaadiidka
Pär Afrikhepri Foundation
min aqri 2 min
Garret Augutus Morgan
Nuqul xiriirinta ah
Wuxuu ku dhashay magaalada Paris ee magaalada Kentucky si qoys saboolka ah, Morgan ma dhaafi doono dugsi hoose. Is-barid, wuxuu u wareegay Cleveland, Ohio ee 1895 wuxuuna u shaqeeyay sidii makaanikada mashiinka dharka lagu dhaqo. Waxa uu soo jiidan doonaa waxyoon ka timid shaqadiisa si uu u abuuro mashiinka dharka lagu dhaqmo ee 1907.
In 1914, wuxuu soo rogaa dab-bakhti ku-reebidda qofka gaas qaada leh waa maaskaro gaas. Sababtoo ah midabtakoorka, wuu ku adag yahay inuu u iibiyo dabka iyo inta badan waa inuu muujiyaa naftiisa. In 1916, qarax in a saldhiga Haydarooliga 75m tunnel hoos Lake Erie, maaskarada badbaadiyay labaatan nolosha iyo waxtarka ugu dambeyntii la aqbalo. Isticmaalka wuxuu noqon doonaa mid baahsan inta lagu jiro dagaalkii koowaad ee aduunka.
1923, wuxuu soo rogaa calaamada Saddex-Caddaanka ah ee isku dayaya in ay isku dayaan taraafikada magaalooyinka waxaana lagu dhejin doonaa mar dambe dabka seddexaad. In 1920, wuxuu ka qaybqaataa abuurista wargeyska African Americans, Cleveland Call waxaana uu xubin firfircoon ka noqonayaa lobby madow, NAACP.
Soo iibso buugga:
Cosmogony at the Ewe
Barashada isbarbar dhigga diimaha (PDF)
Ma jeceshahay boggeena?
Raadi qayb Xulo qayb Si loo tirtiro AFRIKHEPRI-TV WAQOOYINKA IYO FASHIGA KOOXDA LABORKA DEJINTA AFRICAN CUISINE HOGAANADA MADAXA CULUS madadaalo documentary CARRUURTA DEEGAAN ADDOONSIGA Xaalad dhaqameed XAALADAHA SHAQADA AFRICAN WOMEN FURSADAHA WALBA GARGAARKA DEGDEGA IYO DALKA AFRICAN INITIATIONS DIIWAANGELINTA / login BARNAAMIJYADA CIIDAMADA IYO GARGAARKA XIGASHO CODKA KAMA dukaanka LIVE TV BUUGSIGA SI AAD BARNAAMIJKA AUDIO Buugga PDF MUSIC NEWS, NEWS GARGAARKA PARADIGM KAMITE FADLAN AFRICAN FIKRADAHA IYO WAALIDIINTA PHILOSOPHY & PSYCHOLOGY Philosophy iyo Cilmi-nafsiga Caafimaadka iyo Dawada CIYAARAHA gabayo PSYCHART DAAWEYNTA XAALADAHA AFRICA CAAFIMAADKA IYO DARYEELKA BARNAAMIJKA IYO MYSTIA SHOPPING JIIDNADA IYO DALKA SPORTS TEXT OF MATTHIEU GROBLI GURYAHA / NEWS VIDEOS Web-TV
Xuquuqda daabacaadda © 2020 Afrikhepri
Ku soo dhawow!
Gal gal akownkaaga hoosta
Abuur koonto cusub
Buuxi foomka hoosta ku yaal si aad isu diiwaan geliso
*Markii aad iska diiwaangeliso websaydhkaaga, waxaad oggolaanaysaa Shuruudaha & Shuruudaha iyo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Dhammaan beeraha waa loo baahan yahay. Log in
Soo celi eraygaaga sirta ah
Goobtani waxay isticmaashaa cookies. Markaad sii wado raadinta, waxaad aqbashaa dhigaalka dhigaalka buskudyada saddexaad. Faahfaahin intaa ka badan kala soco Siyaasadda cookie.
Ma hubtaa inaad rabto inaad furato qoraalkan?
Fur bidix: 0
Ma hubtaa inaad rabto inaad joojiso rukumada?
Kusoo dir saaxiibkan